CAARADA CAARADA ON DHIRTA INDOOR: SIDA LOO XALIYO UBAX CAYAYAAN AT GURIGA AMA IN LAGU KORIYO, HABABKA BURBURIN IYO TALLAABOOYINKA KA HORTAGGA - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyin ku saabsan sida loola macaamilo caarada caarada dhirta gudaha iyo beerta
Caarada caarada waa cayayaan yaryar oo inta badan degaya beerta, beerta khudradda ama ubaxyada guriga. Ka muuqashada warshad hal mar ah, kuwa dulin ah ayaa si dhakhso ah u waxyeeleeyaa deriskooda. Xakamaynta saxda ahi waa shaqeyn, maadaama ay u baahan tahay ugu yaraan 2-3 daweyn oo dhirta.
Maqaalka ayaa kuu sheegi doona sida loola tacaalo cayayaanka guriga ama koriyo.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato cayayaanku?
Caarada caarada ayaa ah cayayaan yar oo cayayaanka ah. Cabbirka jidhkiisu wuxuu ku dhow yahay isla sidii laf-dhabarta.
Duufaanku wuxuu ku quudiyaa dheecaan dhirta. Inta badan waxay degaan hoosta hoose ee caleemaha, ku duuban saxanka caleen oo leh khafiif ah oo ku dhow dooxada aan la arki karin.
Cayayaanka midabka wuxuu ku kala duwan yahay cagaar iftiin ah ilaa caleenta. Waxaa jira qaniinyo caaro ah dhammaan meelaha dunida, marka laga reebo Antarctica. Cilmi-baadhayaashu waxay kala-saaraan wax ka badan 1000 nooc.
Caarada dhaadheer ma aha cayayaanka. Cayayaanka waxaa ku jira 3 jibbaarlayaasha, iyo shilinta - 4. Dayniinkani waxay ka tirsan yihiin fasalka Arachnids.
Sababaha muuqaalka ee dhirta gudaha iyo beerta
Xaaladaha wanaagsan ee nolosha iyo dhalida - hawada qalalan iyo diiran, heerkulku +30 digrii iyo qoyaan 35-45%. Guryaha, shilinta badiyaa waxay u muuqdaan xilliga qaboobaha markay kululaanayaan kuleylka.
Cayayaanka ayaa qolka ka soo gali kara iyada oo loo marayo furitaanka daaqadda, waxaa la keeni karaa warshad cusub ama leh asaas cusub oo loogu talagalay transplanting.
On sariiraha noolaha noolaha hore ee hoos u dhaca hoos u caleenta, ka dibna - hindhiso on geedka.
Talaabooyinka ugu horeeya marka la ogaado ubaxa
Si loo ogaado joogitaanka cayayaanku wuxuu noqon karaa dhowr dabeecadood. Kuwaas waxaa ka mid ah:
muuqaalka kore ee dhibco yaryar oo midabaysan oo ku yaal saxanka warqadda;
qodobbada kobaca ee cabbirka xajmiga;
joogitaanka xargaha dusha sare ee xaashida;
caleemaha ayaa duubaya oo baaba'aya.
Iyadoo caleemo jaban oo xoog leh ayaa hoos u dhacda. Natiijo ahaan, dhirta ayaa daciifisa, dharbaaxo iyo maqnaanshaha gargaarka waqtigeeda, ayaa dhimata.
Isla markiiba Ka dib marka la ogaado calaamadaha cudurka, dhowr ficilo ah oo degdeg ah ayaa loo baahan yahay in la qaado.. Marxaladda ugu horreysa iyo kuwa qasabka ah waa la dhaqaa dhammaan qaybaha cudurrada faafa ee leh saabuunta dharka lagu dhaqo. Tani waxay yaraynaysaa tirada dadka ku nool da 'yaraanta. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad dhaqdo oo fayodhowdo dhammaan dheriyada iyo boogaha (ku rid biyo karkaraya), xayawaanka daaqada, dhalada, sheyga iyo xitaa daahyada.
Sida loola dagaalamo: tilmaamo faahfaahsan
Qodobka guud ee lagu tirtirayo dulin-falka waxaa ka mid ah tallaabooyinka soo socda:
Kala saar dhammaan caleemaha qafiifka ah iyo lafaha leh (iyaga oo ka saaraaya, waxaad si deg deg ah uga saari kartaa 25% dulin).
Kala saar dhirta ku xiga.
Ku dhaq dhirta (infekshinka iyo ku dhow) biyo leh saabuun. Kala duwanaan - shaandho dhaqid.
Ku waraabi dhirta biyo badan (tani waxay ku dhaqi doontaa haraadiga saabuunta), waxaad kaloo u baahan tahay inaad daadiso ciidda.
Ku rid bac caag ah dheriga leh dhirta cudurka qaba, ku rid meel madow dhawr maalmood.
Tallaabooyinkaas waxay u baahan doonaan in lagu celiyo 2 jeer oo dheeraad ah isbuuciiba.
Kiimikooyinka ayaa ka takhalusi kara tickska si dhakhso ah.. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo daaweyn dhowr jeer leh mudo ah 5-10 maalmood. Wixii burburinta caarada caarada waa cayayaanka (Fitoverm, Vertimek, Kleschevit) iyo acaricides (Apollo, Sunmite, Flumate). Eeg qiyaasta ku qoran tilmaamaha, sida marka loo eego dhirta guryaha iyo beeraha ayaa ka duwanaan doona.
DAREEN! Daawooyinka kiimikada waxaa loo isticmaalaa oo keliya iyada oo la raacayo tilmaamaha, maaddaama ay xooggooda sare ay u burburin karaan geedka.
Kala duwanaanta iyo sifooyinka:
Insectoacaricides dil dhammaan cayayaanka. Kuwani waa daawooyin loogu talagalay in ay la dagaallamaan cayayaanka khatarta ah iyo caarada.
Asal ahaan, daroogooyinkaasi waa sun, waxay ku habboonaadaan wadada ama qolalka leh hawo wanaagsan. Waxtarka ugu fiican waa Actellic iyo Fitoverm.
Acaricides - Kiimikooyinka la isticmaalo oo kaliya in lagu dagaalo shilinta.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo dhirta beeraha iyo kuwa gudaha, iyo sidoo kale daaweynta goobaha. Baakadaha qaarkood waxaa ku jira qora "leh tallaabo qani ah" - taasi waxay ka dhigan tahay inay burburinayaan oo kaliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale dirxiga.
Haddii dhirta aysan ku jirin xaalad dayacaad ah, markaa hababka dadku waxay noqon doonaan kuwo amaan ah oo aad u fiican.
Raacid Diyaarinta iyo isticmaalka
Saabbuun suuxi biyo (1: 3).
Sumobada caleemaha iyo laanta geedka. Xooga badan ee xalka ayaa xumbo, xawaare fiican.
Dunida sidoo kale waxay u baahan tahay in la waraabiyo xal diyaar ah, laakiin si taxadar leh u sameyso habka si aan saabuunku u helin xididada.
Aalkolo caafimaad (96%). Qoyi tampon ama suufka, tirtir caleemaha. Tilmaamo Mature ah ayaa la burburin doonaa, laakiin dirxiga ayaa sii ahaan doona.
Khamrigu wuxuu awood u leeyahay inuu si dhakhso ah uumi baxo, caleemuhuna waa inaysan waxyeelayn. Laakiin weli way ka fiicnaan kartaa in aan geeddi-socodka hawshaas dhicin oo leh caleemo khafiif ah.
Soo saarka beerka
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato dhowr madax oo toon ah oo la jarjarey.
Suurada keeneysa waxay ku ridaan weel ku shub 1 litir oo biyo ah.
Bangiga ku rid meel gudcur ah 5 maalmood.
Marka xalka la isku shaandheeyo, ku dhufo biyo 1: 1, rusheeyo dhirta.
Faleebo diirka basasha
100 g diirka basasha, ku shub 5 litir oo biyo ah.
Ku adkee ilaa 5 maalmood.
Kala soo xiriir 3 wicitaan kasta 5 maalmood oo kasta.
Dhiigga digirta madow
Iska yaree 1 kg ee afkoda iyo caleemaha, ku dar biyo (10 l), istaag 12 saacadood.
Cadaadiska oo ku dar 30 g oo saabuunta dareeraha ah.
1 kg cawska qallalan ku shub biyo iyo isku kari ilaa 2.5 saacadood.
Qabow, cadaadis oo ku dar biyo ilaa mugga 10 litir.
Demi geedka 2 jeer maalintii 3-4 maalmood iyada oo shey kasta oo la helay.
Maraq ka soo dushooda baradho
800 g oo ah dhalooyinka barafka la qalajiyey ku shub 10 litir oo biyo ah.
Ku adkeyso 4 saacadood.
Isticmaal mashiinka si joogto ah.
Kala shaqeynta dhirta tinctures iyo decoctions waa in la fuliyaa fiidkii.
Haddii saameyn aan la daaweyn, waxaa fiican in aan dib loo dhigin oo isticmaalo kiimikada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan la dagaallanka caarada caarada leh ee caawinta alaabta dukaanka iyo daaweynta dadka, halkan ka akhri.
Qodobka ugu muhiimsan ee muuqaalka caarada caarada ayaa ah hawo qalalan, sidaas darteed digniinta ugu wanaagsani waxay ku rusheeyaa biyaha dhirta xilliga cimilada qallalan. Isla mar ahaantaana waa lagama maarmaan in la hubiyo in biyaha aysan ku urursaneyn asalka asalka.
Ka taxadar dhirta xilliga jiilaalka, sababtoo ah hoos u dhaca dhererka maalinta iyo heerkulka hooseeya, biyaha ayaa si tartiib ah uumi baxaya.
Si aad uga takhalusto dulin, geedka waa in aan lagu dhexdhigin biyo, sababtoo ah marka ay la xiriiraan biyaha, shilinta waxay u muuqdaan hub hubin ah oo ah goobooyin hawo leh.
Xalka guriga lagu xakameynayo wuxuu ka caawinayaa ka hortagga caabuqa.
Si aad u sameyso waxaad u baahan tahay inaad isku dardarto 20 g oo ah qorfe, 40 g oo geedo talyaani ah, ku shub 1 l oo biyo ah.
Karkari, qabow oo ku dar 40 g oo ah toonta la jarjarey.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa 2-3 dhibcood oo saabuun.
Si looga hortago caleemaha in lagu xakameeyo 2 maalmood 2 asbuuc.
Kala-duwanaanta ka hortagga goobta:
Si joogto ah u shaqeynta qalabka beerta leh jeermiska.
Qodbo ciidda xilliga dayrta.
Inta lagu jiro muddada fruiting - jaridda caadiga ah iyo dabacsan xiga.
Ku hoggaansanaanta talooyinka wareegga dalagga.
Waraabinta joogtada ah (sida qoyaanka qolofka dhulka), mulching carrada.
Kormeer maalinlaha ah ee caleemaha cudurka. Marka la ogaado raadinta sumeeyaha - goosta caleemaha cudurka qabta oo gubana.
Ka takhalusidda caarada caarada waxay noqon kartaa hawl culus oo xanuun badan. Iskuday inaadan abuurin shuruudo wax ku ool ah oo waxtarkooda saameyn ku yeesha dhalmo-falka. (kuleyl, qoyaan, qallayl).
Guriga, samee nadiifinta qoyan, fiiri heerarka caaflmaadka, tirtiro boodhka oo kaliya maaha xayndaabka, laakiin sidoo kale caleemaha. Goobta si joogto ah hawada u aqalka dhirta lagu koriyo, waqtiga si aad uga takhalusto caws.